Ogaden News Agency (ONA) – Looma kala hadhin Habeenkii Ogadenia ee Sanca (Ogaden Night/Sana)
Looma kala hadhin Habeenkii Ogadenia ee Sanca (Ogaden Night/Sana)
Posted by ONA Admin	/ November 18, 2011
Waxaa maanta ka dhacday magalada Sanca caasimada dalka Yemen xaflad si wayn loo soo agaasimay oo lagu qabtay hoolka wayn ee shirarka ee Layalil-Ansi Xafaladda ayaa loogu magac daray Ogaden Night. Xafladan oo ahayd xaflad dhaqamed ayaa waxaa iska kaashaday Gudida Qaxootiga S.Ogadenia ee Yemen iyo hay’adda INTERSOS-Yemen, waxaana maalgalinteeda lahaa UNHCR/Yemen.
Waxaa xafladda ka soo qayb galay dadwayne aad u tira badan oo boqolaal ah kuwaasoo isugu jira qaxootiga Ogadenia ee dalka Yemen jooga iyo waliba dadwayna kale oo ka socday qaxootiga umadda Somaliyeed. Sidoo kale xaflada ayaa waxaa ka soo qayb galay dhamaan haya’adaha samafalka ee hoosyimaad UNHCR sida, INTERSOS, IRD, ADRA, IDF iyo SAVE THE CHILDREN.
Biloowgii xaflada ayaa waxaa ku soo dhaweeyay martsharafatii mudane Xuseen Makhtal Daahir oo ah Gudoomiyaha Gudida Qaxootiga Ogadenia ee dalka Yemen isagoo uga mahad celiyay dadwaynihii ka soo qayb galay munaasabada sida habsamida ah loo soo gaasimay. Ka dib aayado Quraanka ee lagu furay xaflada ayaa waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay mudane Xuseen Maxamed (Gabood) oo ah xidhiidhiyaha jaaliyada isaga oo halkaas khudbad dheer oo mela badan taabanhaysa kasoo jeediyay. Mudane Gabood wuxuu ka war bixiyay marxaladihii la soo maray iyo halka maanta lataagan yahay.
Khudabadahaa qiimaha leh kadib ayaa waxaa mid mid loogu soo dhaweeyay makarafoonka hay’adihii kasoo qayb galay xaflada iyaga oo dhamaan ku balan qaaday inay hiil iyo hooba lagarab taagan yihiin Qaxootiga Ogadenia ee nacabka uu dhulkoodii hooyo kasoo barakiciyay, waxayna halkaas ku sameeyeen balan qadyo inay ka gargaari doonaan intii karaan kooda ah xaga waxbarashada, caafimaadka iyo waliba waxii kaleey awoodaan.
Waxaa xusid mudan kooxda fanka Horseed oo soo bandhigtay ciyaaraha ey hidaha iyo dhanqanka u leeyihiin umadda Ogadenia, oo isugu jiray dhaanto, buraanbur, gabayo iyo waliba heeso aad u qiiragaliyay dadwaynhii fadhiyay hoolka.
Waxaa ugu danbayn hadal gaba-gabayn iyo guubaabo isugu jira soo jeediyay mudane Cabdi salam Maxamed oo ah Gudoomiye ku xigeenka Gudida Qaxootiga.
Sayid Xakiim/Ogaden Committee in Sana’a.